2018 အရောင်ခေတ်မှီဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်း - က Black, အနီ, အဝါနုရောင်ရှိသောသော, မှုန်, ဂျာကင်အင်္ကျီ, Ombre, စတိုင်ပုံစံဒီဇိုင်း
2018 အရောင် Matte လက်သည်း - သန့်စင်ပြီးနှင့်ကြော့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာမူလဒီဇိုင်း။ ဒါဟာခံရနိုင်သည်အရှိဆုံးမသိမမြင်နိုင်သော rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူပြည့်စုံမူကွဲ, အတွက်အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်ကဆောင်ရွက် kamifubuki creamy နှင့်ရတဲ့အရာတွေထွန်းလင်းပေါင်းစပ်တစ်ပြိုင်နက်လှပပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများ။
Matte လက်သည်းဆိုးဆေး 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ခေတ်မှီဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018 အထူးပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်စတိုင်ဖြေရှင်းချက်ပိုနှစ်သက်သူကိုဖက်ရှင်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျှင်အဖြစ်။ ဒါကလက်သည်း-Art ၏ဦးဆောင်သခင်ပူဇော်?
လက်သည်းပန်းကန်၏အမှန်တကယ်အရှည်ပေါ်မှာတစ်ခုတည်းအရောင်အပေါ်ယံပိုင်းတိုတိုဖြစ်ပြီး, လမ်းကြောင်းသစ်အလွန်ရှည်လျားမဟုတ်ပါဘူးဖက်ရှင်ထဲကမသွားပါစေနဲ့။ အနည်းငယ်လက်ချောင်းများ, ဂျီဩမေတြီ, စိတ္တဇ, ပန်းနှင့်ပန်းပုံစံများ, တစ်အနာဂတ်စတိုင်ဘာသာရပ်ရေးစပ်သီ, ဇာ, အဟာဆလဗ်, အိန္ဒိယနှင့်ဂရိအဆင်တန်ဆာတွေနဲ့ရိုးရာပန်းချီအပေါ် takeoff အာရုံတွင်။
လက်သည်း၏ပုံသဏ္ဍာန်။ ဒါဟာ pointy ရှည်မျောမျောဘဲဥပုံသူတို့ကိုယုတ်ညံ့ခြင်း, Fore ပျားရည်, dancer များနှင့်စတုရန်းပျော့မဟုတ်လာ, ဒါပေမယ့်နေဆဲအရှက်တကွဲအကျိုးအနီရောင်အနားနှင့်အတူ stilettos ။
နည်းစနစ်များနှင့် optional ကိုအင်းလေး။ အဆိုပါအစိုင်အခဲ, ဆေးမှုတ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားပုံစံများအပြင်, တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်နေသောခေါင်းစဉ်: နေမှုကိုချေဖျက်, နက်ရှိုင်း desing အမျိုးမျိုးကျောက်များနှင့်သတ္တုကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူအလှဆင်ဟာဖယောင်းစက္ကူပုံစံများ။
တိုတောင်းသောလက်သည်း 2018 အပေါ် Matte လက်သည်းဆိုးဆေး
တဦးတည်းသေံအတွက် 2018 မသာ၌ကြီးသောအတိုဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီးကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးချင်းစီအသံထွက်အတိုင်း Ombre နည်းပညာမီးခိုးရောင်နှင့်အဝါနုရောင်ရှိသော၏ pastel တန်ချိန်နှင့်အတူငွေရတတ်သောသူသည်နက်သောအဆင်းအရောင်, ပေါင်းစပ်။ အကောင်းဆုံးနှင့်မူရင်းပေါင်းစပ်:
မီးခိုးရောင်နဲ့ပန်းရောင်, အဖြူရောင်နှင့်အနီရောင်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်:
ဖြူဖပ်ဖြူရောပန်းရောင်, milky အဖြူနှင့်မှောင်မိုက်အနက်ရောင်, စိုစွတ်သောကတ္တရာ, အပြာ, ပုလင်း, khaki;
အဝါရောင်, ခရမ်းရောင်, lilac နှင့်အပြာအရောင်များ pastel ရေးဆွဲ၏အခြေခံပေါ်မှာ။
ကျွမ်းကျင်စွာအနည်းငယ်လက်ချောင်းပုံစံဖြစ်စေလျက်, နှစ်ဖက်ဖို့အာရုံလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့, အသေးစားတစ်ခုတည်း crystals add, ထိုပုံစံမျိုးလမီးမောင်းထိုးပြသော, မှုန်များနှင့်တောက်ပြောင်ပေါင်းစပ်လျှင် 2018 တိုတောင်းသောလက်သည်းပေါ်တွင် Matte လက်သည်းဆိုးဆေးစံပြဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအဓိကအရောင်များထဲမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအရိပ်ထဲမှာပေါင်းစပ်, ဒါမှမဟုတ်ဥပမာ, ဆနျ့ကငျြဘပေါ်မှာကစား, အကြော့ - အဝါနုရောင်ရှိသောမီးခိုးရောင်နဲ့ပန်းရောင်, စတိုင်နဲ့တောက်ပတဲ့ - အနက်ရောင်နှင့်အပြာကြွယ်ဝသော, အစိမ်းနှင့်အ burgundy နှင့်အတူတောက်ပသောအရောင်အဆင်း။
2018 နောက်ပြီးရှည်လျားသောလက်သည်း Matte
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းများအတွက် chic ရွေးချယ်မှု - ထိုမီးခိုးမြူကြိုက်တတ်တဲ့သူများကိုယ်နှိုက်အတွက်ရှည်လျားသောလက်သည်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီးအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချွန်ထက်သောဗာဒံသီးနှင့် "ဘဲလေးကသမား" ၏ပုံစံ 2018 လမ်းကြောင်းသစ်ပုံစံများ, ပင် monotonous စွမ်းဆောင်မှုကိုငါသိ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကဲ့သို့ပင် - အနက်ရောင်နှင့်အဝါရောင်, အပြာရောင်နှင့်အနက်ရောင်များနှင့်အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့် burgundy အကွာအဝေး - သည်စိတ္တဇဂျီသြမေတြီမှာ understeer ပေမယ့်စတိုင်ပုံစံနှင့်အသေးစား crystals, မူရင်းကြည့်ရှုပါ။ ချောမွေ့အရောင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာသူတို့ရဲ့ရာထူးလွှဲပြောင်း "မနေပါနဲ့ ကျိုးဖန် " နှင့်လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာ - Matt နှင့်စကျင်ကျောက်ပေါင်းစပ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကအိမ်မှာမသေသပ်သောရှောင်ရှားနှင့်သင့်နောက်ပြီးတစ်စုံလင်သောအမြင်ပေးရဖို့ဘယ်လိုပေါ်အချို့သောလက်တွေ့ကျတဲ့အကွံဉာဏျပေးပါ။ Matt အရောင်တင်ဆီလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ:
ယင်းအပေါ်ယံပိုင်းသေးငယ်တဲ့ချို့ယွင်းချက်နှင့်လက်သည်းပန်းကန်၏မူမမှန်ရန်အလွန် capricious ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကလက်သည်း, ပိုကောင်း polish;
သူတို့တပ်မက်လိုချင်သောအကြိုးသကျရော, "ကတ္တီပါ" မရနိုငျသောကွောငျ့ကလိမ်းဆေးနှင့်အဆီအာဟာရအတွက်လက်သည်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
စိတ်ကူးများဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်း 2018
တစ်ဦးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်းရဖို့ရာသီသစ်၏ 2018 ဖက်ရှင်စိတ်ကူးများထိခိုက်အတူတကွခေတ်သစ်လက်သည်းပန်းချီအပေါငျးတို့သဒေသများထားကြပြီ။
စတိုင် monotone ။ နောက်ပြီးလက်သည်းအပေါ်ကောင်းသောကြည့်ပြည့်နှက်, အနက်ရောင်အပြာ, အစိမ်း, အနီ, စိမ်း, မီးခိုးရောင်နဲ့အဝါနုရောင်ရှိသော palette ထဲမှာဆိုရင်တော့ Matte 2018 manicure ။ ထူးခြားသောပေမယ့်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်: အဝါရောင်, လိမ္မော်ရောင်, နီယွန်အရောင်အဆင်းနဲ့အရိပ်။ အဆိုပါ Salon အတွက်ဂျယ်လ်များနှင့် shellac အိမ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်, ကျွမ်းကျင်သူများတစ်လက်သည်း-လူသိများကုမ္ပဏီများ, ဥပမာအားဖြင့်, OPI, အယ်လ် Corazon, Mac, ORLY နှင့် Golden နှင်းဆီရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်။
မူရင်းဒီဇိုင်း။ အနည်းငယ်ခြေချောင်းအာရုံစိုက်, ဂိမ်း Contrast ။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်: နေမှုကိုချေဖျက်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောအာကာသ, တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလက်သည်း Openwork, ပန်းချီ, crystals, သတ္တုကိန်းဂဏန်းများ၏ခွဲဝေ confetti , ဆေးမှုတ်မျက်ရည်စက်လေးတွေနှင့်အသေးစားအရောင်အစက်။ တောက်ပသောသဲ, ပုလဲ, ကြေးမုံနှင့်တစ်ဦးအမှုန့် sequins များအသုံးပြုမှု။ Zonal နှစ်ဆအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ယွန်း၏ရောနှောအမျိုးအစားများ - Matt နှင့်တောက်ပြောင်, လနှင့်ပြင်သစ်ဂျာကင်အင်္ကျီ gradient ကိုပေါင်းစပ်။
ခေတ်မှီထုတ်။ ဝယ်လိုအား: လက်ခြယ်သအသေးစားနှင့်အကြီးစားပန်းပွင့်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, animalistic ဒီဇိုင်းများ, တိုင်းရင်းသားပုံစံများ, အခွားထိုးပြီးကျစ်, ဂီတဆိုင်းဘုတ်များ။ မျက်နှာသာအတွက်: ဂျီသြမေတြီ, စိတ္တဇ, ဇာတ်ကြောင်း drawings နဲ့ကျောက်စာ။ ပူပြင်းတဲ့သတင်း - စကျင်ကျောက်နှင့် "ကျိုးဖန်" ။ ကျွမ်းကျင်သောလက်သမားအဆိုပါပုံစံများကိုဆွဲယူ, ဒါပေမယ့် sequins, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်, သတ္တုပါးနှင့်အလုံပိတ်ဇာများနှင့်တိုက်ရိုက်အပင်များနှင့်ပန်းပွင့် element တွေထဲကသူတို့ကိုပြန့်နှံ့မသာ။
Matt အနက်ရောင်နောက်ပြီး 2018
အဆိုပါရဲရင့်ခြင်းနှင့်သာမန်ထက်မှတစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောထို့အပြင်ဆိုရင်တော့ Matte အနက်ရောင်ယွန်းနှင့်အတူလက်သည်း 2018, ဒါပေမယ့်စင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ကြသည်။ အပြောင်းအလဲ၏လမ်းကြောင်းသစ်:
အတော်ကြာပုံစံများနှင့်နည်းစနစ်များထဲမှဒီဇိုင်း, အစက်, openwork, abstraction, အာကာသ, strips တွေ rhombuses အတွက်အထီးကျန်မှုတွေဂျာကင်အင်္ကျီ, အနုတ်လက္ခဏာအာကာသနှင့်ပြည့်စုံလွှမ်းခြုံ၏ပေါင်းစပ်;
တစ်ခုလုံးကိုလက်သည်းကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် vector အခြေခံ patterned လိုင်းများအဘို့အရန်အဖြစ်ဝင်းဆိုရင်တော့ Matte နှင့်ရတဲ့အရာတွေအရောင်တင်ဆီ;
အနီရောင်ဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018
စမတ်ပေါ့ပေါ့လေးတို့သည်အဘို့အတောက်ပသောဖြေရှင်းချက် - Matte လက်သည်းဒီဇိုင်းကို 2018 အနီရောင်အဆင်းအရောင်, တောက်ပဂန္နှင့်ပြည့်နှက်မှတ်မိလွယ်တဲ့အဖြစ်။ သူက "Point" နှင့်မျှမချွန်ထက်တိုတောင်းရင်ပြင်ပေါ်တွင်မဆိုအလှဆင်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်နှိုက်အတွက်ဆုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမီးမောင်းထိုးအတွက်အမြဲဖြစ်လိုသောသူတို့အဘို့အသီးအသီးနေ့အဘို့တောက်ပနောက်ပြီး 2018 brushed kamifubuki နှင့် "ကျိုးဖန်" ရောနိုင်ပါတယ်။ ညဦးယံအချိန် ensembles များအတွက် - သန့်စင်ပြီး Strass နှင့်တောက်ပသောပုံစံမျိုးကိုသုံးပါလက်ခြယ်ပန်းပုံစံများ, သို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာစတိုင်။
Beige ဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018
အတွင်းထိပြီးတစ်စတိုင်ရွေးချယ်မှု လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်း - လွင်ပြင်အဝါနုရောင်ရှိသောဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်းတိုတိုနှင့်တာရှည်နှစ်ဦးစလုံး, အနည်းငယ်မျှသာ၏ဝိညာဉ်အတွက် 2018 Trends ။ Fangled ဦးဆောင်အနုပညာရှင်များထံမှကမ်းလှမ်း:
တဦးတည်းနှစ်ခုလက်သည်းပေါ်မှာဖောင်းကြွ straza သိမ်မွေ့အသံထွက်သို့မဟုတ်;
သို့မဟုတ် zonal လွှမ်းခြုံ Beige အရောင်အတော်ကြာအရိပ်၏အသုံးပြုမှုကို;
ပုံစံပတ်လည်ထိုးပြီးနှင့်တရုတ်စတိုင်အပင်များနှင့်ပန်းပွင့်ရဲ့ဒြပ်စင်၏ပုံဆွဲနှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့နောက်ပြီး brushed ။
rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည် 2018 နှင့်အတူ, Matt နောက်ပြီး
hits အဖြစ်ဝေးဘဏ္ဍာရေးခွင့်ပြုသကဲ့သို့သင်တို့ကြိုက်သလောက်ကယ့်စျေးကြီးခြင်းနှင့်ပင်အဖိုးတနျဖို့, သမားရိုးကျ crystals ကနေ Swarovski ကျောက်ခဲတို့ကိုအမျိုးမျိုးဖြင့်အလှဆင်ထားသည့် 2018 ဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်း manicure နှင့်ပါလိမ့်မယ်။ rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ပုံစံမျိုး၏သီးခြားဒြပ်စင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အဓိကရုပ်ပုံလွှာကိုအလေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အောင်ပွဲခံဒီဇိုင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနောက်ပြီးအပေါ်စုံစုံတစ်ခုတည်း blotches များအတွက်ဇိမ်ခံအရှေ့တိုင်းစတိုင်အင်းလေးအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်။
အဆိုပါပေါင်းစပ် Non-အသေးအဖွဲကြည့် openwork ပုံစံများ vtirki, မှောင်မိုက်နှင့်အလင်းအရောင်များအပေါ်အမြောက်အများ applications များနှင့် crystals, လ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုင်းများအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ဂျီဩမေတြီ straza ချွတ်နှင့်တြိဂံ INSERT offset နေကြသည် mirror ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရင်တော့ Matte နှင့်ရတဲ့အရာတွေမျက်နှာပြင်အကြားနယ်စပ်ခွဲထုတ်လက်သည်းပန်းကန်ပေါ်အချိုးမညီစီးဆင်းနေသောအကှေ့အကောကျ။
ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ, Matt နောက်ပြီး 2018
ဖက်ရှင်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်း 2018 ရာသီအလိုက်ပြပွဲအတွက်ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြသလဲ
ဦးဆောင်သခင်၏စိတ်နှလုံးမှာပန်းရောင်, မက်မွန်, တစ်ဦး, ပန်းစိတ္တဇနှင့် animalistic ထုတ်, လက်ရာမြောက်သောကတ္တီပါ monograms နှင့်အသေးစား crystals သို့မဟုတ်သတ္တုကိုအပိုင်းပိုင်း၏အငယ်စားပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူ, အဝါနုရောင်ရှိသောအဖြူနှင့်အပြာအရောင်များအတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့နောက်ပြီးထားတော်မူ၏။
ချမ်းသောကာလ၌, ဒါပေမယ့်လည်း Valentine Day ကို၏အကြိုအပေါ်မသာအရေးကြီးပါသည်နှင့်နွေဦး၏လာမယ့်အရာ openwork ပုံစံများ, နှလုံးသားများနှင့်အတူတိုတောင်းသောလက်သည်း 2018 အပေါ် Matte လက်သည်းဆိုးဆေး။
အစက်နှင့်ကျောက်, နှင့် ", ငွေ" သို့မဟုတ် "ရွှေ" ပုံစံများနှင့်အတူပြည့်စုံလက်ခြယ်ပန်းများနှင့်အပင်များ, monograms နှင့်ယ်ကနှင့်အတူတောက်ပသောအရောင်ကိုနှစ်ချက်ဒီဇိုင်း။
တစ်ဦး Matte finish ကိုအတူ 2018 Ffrench
စတိုင်ဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018, အဝါရောင်အနက်ရောင်, အဝါနုရောင်ရှိသော, အဖြူနှင့် burgundy အစီအစဉ်အတွက်ပြင်သစ်နှင့်ဟောလိဝုဒ်အပြုံးမှ configured နှင့်အပြည့်အဝဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောသတိပညာရှိပုံစံ coating နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအပြုံးနှင့်အမှတ် strass ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူတစ်ဦးဇာပုံစံ, ရောင်စုံပြင်သစ်စာအိတ်ကြောင့်အလင်း-based ကို၎င်း, အနုတ်လက္ခဏာအာကာသ - မူရင်းဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018, တူညီတဲ့လေသံထဲမှာနောက်ဆုံးညှစ်သံမြည် velvety နှင့်ရတဲ့အရာတွေအင်္ကျီကိုပေါင်းစပ်။
Frosted gradient ကိုနောက်ပြီး 2018
လှလှပပမှောင်မိုက်ကြွယ်ဝသောအရောင်များနှင့်တောက်ပရိပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး Ombre 2018 ။ အထင်ကြီးစရာရှာနေအသွင်ကူးပြောင်းမှု: အနက်ရောင်နှင့် burgundy, အပြာနှင့်အနက်ရောင်, မီးခိုးရောင်နှင့်မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်, အနီရောင်၏အရိပ်၏ဂိမ်း, ခရမ်းရောင်နှင့် Marsala ။ တဦးတည်းလက်ချောင်းပေါ်မှာနက်ပြာရောင်, burgundy နှင့်စိုစွတ်သောကတ္တရာကနေ gradient ကိုနှင့်အတူမူရင်းဆိုရင်တော့ Matte 2018 နောက်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်နို့-အဖြူအရောင်။ အမှုန့်နှင့်အတူကြွယ်ဝသောအရောင်များတောက်ပသောအဝါရောင်-လိမ္မော်ရောင်-ပန်းရောင်, မက်မွန်သို့မဟုတ်အပြာရောင်-ပန်းရောင် Ombre ၏ ကျေးဇူးပြု. မိတ်ဆွေတို့ကို။ နူးညံ့ကြင်နာမှုပိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ် nyudovomu gradient ကို။
2018 အရောင် Matte လက်သည်း - ဂျီသြမေတြီ
ဂျီဩမေတြီပုံစံများနှင့်အတူလှပသောဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018 ခုနှစ်မှာဦးဆောင်သောနေရာများတစ်ခုမှာ။ အဆိုပါတိကျသောဖက်ရှင်ကိန်းဂဏန်းနှင့်စိတ္တဇဂျီသြမေတြီ, လိုင်းများ, ရင်ပြင်, rhombi, စတုဂံများနှင့်အကှေ့အကောကျ, စက်ဝိုင်း, ဘဲဥပုံ, အသေးစားစက်နှင့်ပါးလွှာနှင့်ကျယ်ပြန့်လိုင်းများအရောအနှောသတ္တုသတ္တုပါးအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကာဆနျ့ကငျြဘ texture သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောယွန်းပေါ်မှာခြေရာခံ။ ဒီအမှုန်သောနောက်ပြီး 2018 မှာတငျ-ကျောနေ့စဉ်နှင့်အဘို့စုံလင်သည် ကော့တေးကြက်သွန်နီ ။
ခေတ်မှီဆိုရင်တော့ Matte နောက်ပြီး 2018
နွေရာသီအင်္ကျီ 2017 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စတိုင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကောင်းဆုံးစတိုင်များ
ဖက်ရှင်ဦးထုပ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
နွေဦး 2015 အမျိုးသမီးအကျီ
လက်သည်း - ဖက်ရှင် 2015
Nike ကပြေးဖိနပ် 2016
မိန်းကလေးများ 2013 စတိုင်အဝတ်အစား
ဒင်ဗာမြို့မှ Jean - နွေ-နွေရာသီ 2016
Zara စားဆင်ယင် 2013
မြင့်မားသောခါး 2016 နှင့်အတူဂျင်းဘောင်းဘီ
စူပါ Adriana Lima ၏အမြင့်နှင့်အလေးချိန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အဘယ်အရာ dropper Pentoksifillin?
အဘယ်ကြောင့် bug တွေအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်?
Activated ကာဗွန် whitening သွားများ
ဆံပင်အဘို့ Apple က cider ရှလကာရည်
White က lilac - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့် Plasterboard ဆောက်လုပ်ရေး
နှင်းဘုရင်မ - ဘယ်လိုအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ဘို့အဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့?